Ukusebenzisana Kwekhodi Yesikhathi Sangempela Neqembu | Martech Zone
NgeSonto, uDisemba 20, i-2009 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2012 Douglas Karr
Isikwele ukuthuthukisa ukuthi yimaphi amadokhumenti e-Google kuma-suites asehhovisi. Nge-Squad, iqembu lokuthuthukisa elisabalale emhlabeni wonke lingavula ifayili elifanayo, lisebenze ngalo ngasikhathi sinye, futhi lixoxe ngokuhlelwa. Akusekho mihlangano emide yokubuyekezwa kwamakhodi lapho ithimba lifumbathisa, lidlulisa ukuhlela komunye nomunye, lihlanganisa futhi lishayise lokho kuhlelwa… I-Squad yenza uma kungabi namandla.
Isikwele sisuselwa kuwebhu, iSoftware njengesixazululo sesevisi ezingabizi kakhulu. Uma ungumsebenzisi oyedwa, ungayisebenzisa mahhala! Ngama- $ 39 / ngenyanga ungathola iphakethe lethimba lamalungu angafika kwangu-5.
Tags: ikhodi yomhlelingokubambisanaiqembu